ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အငြင်းပွားနေတဲ့ လယ်ယာတွေကို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီး (ရုပ်သံ)
အငြင်းပွားနေတဲ့ လယ်ယာတွေကို ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီက ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီး (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:01 AM
ဇေကမ္ဘာပိုင်ရှင် မောင်ခင်ရွှေက တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မီရှင် ဥက္ကဌ တို့လုပ်နေတဲ့ ပညာရေးအတွက် ငွေလှူလိုက်တယ်- တရားဥပဒေ အတိုင်းဖြစ်ဘို့မျှော်လင့်ချက် ဝေးပြီလား မသိဘူး
ခင်ရွှေမင်းသေရင် ဘာမှ ယူသွားလို့ မရဘူး. လေယဉ်မစီးနဲ့မီးလောင်ပြီးပျက်ကျမယ် မြေီးထဲတောာင် အလောင်းမရောက်တော့ဘူး. လူတွေမင်းကိုအော့ နှလုံးနာနေပြီ
နအဖခေတ်ထဲမှာ ကျိကျိတက်ချမ်းသာလာတဲ့ ခရိုနီတွေထဲမှာ ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေဟာ အရင့်သီးဆုံးအယိုင်းစိုင်းဆုံး အပြောအဆိုတွေဟာ လူကိုလူမထင်တဲ့ ခပ်ယိုင်းယိုင်း စကားတွေကြီးပဲ သူကြံ့ဖွံအမတ်ဖြစ်လာရတဲ့ကိစ္စကလဲ အယင်အစိုးရခေတ်ထဲက လူကြီးတော်တော်များများနဲ့ ပါတ်သက်နေသလို သူ့ရဲ့ခရိုနီစီးပွါးရေးကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လိ်ုစိတ်နဲ့ သူရည်ရွယ်ပြီးရအောင်ကျိုးစားခဲ့တဲ့သဘောပါပဲ။ ခရိုနီဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ သဘောထားပြော့ပြောင်းပြီး တက်လာတဲ့အစိုးရနဲ့လဲအဆင်ပြေ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာလဲ ထိခိုက်နစ်နာမှုကင်းစေ မိမိစီးပွါးရေးလဲ အထိုက်အလျှောက် ဆက်လက်တိုးတက်စေ ဆိုတဲ့ စေသုံးစေ (စေတနာသုံးပွင့်ဆိုင်)စိတ်မျိုးရှိတဲ့ Max Myanmar ကိုဇော် တို့လိုလူမျိုးကတော့ မနေ့တနေ့ကပဲလူထုကြားထဲဆင်း ငြှိနိုင်း အားလုံးကျေနပ်အောင်ဖြေရှင်းပေး သူလုပ်မဲ့ ဓါတ်ဆီဆိုင်လဲ ဆက်ဖွင့်လို့ရ ဘယ်လောက် တော်သလဲ ချီးကျုးသင့်သလဲ။ဟိုတလောကလဲ ဆေးရုံတခုဆောက်လုပ်လှူဒါန်းပေးခဲ့ပြီးပြီလေ ကိုဇော်ကတော့ပိုပြီးချမ်းသာအုံးမှာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတွေးသစ်အမြင်သစ်နဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ခေတ်ကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်လို့ပဲ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲလေ ဗိုလ်ချုပ်တွေပိုင်အောင်ပေါင်းပြီးဂွင်ရိုက် ဂေါ့ဖ် အရှုံးခံရိုက်ပြီး Permit ရဖို့ အပေးအယူညှိပြီးလုပ်စားတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပြီ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ (ငွေတွေအများကြီးရှိတာပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာတဲ့ စီးပွါးရေးအခွင့်အလန်းတွေ အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့မှာပါ ဘာလို့ ဒီအတင်းအကျပ် အာဏာသုံးစီးပွါးရှာတဲ့အလုပ်တွေဆက်လုပ်ချင်နေတာလဲ "ဇေကမ္ဘာရေ"